Namuhla breadmaker ungaphakathi cishe yonke imindeni. Sekuvele umane esisemqoka, ngoba njalo ekuseni ngifuna ukubamba iphunga elimnandi lesinkwa fresh futhi uzizwe ukunambitheka layo eliyingqayizivele. lula kakhulu ukupheka in the zikagesi zasendlini kanye inhlama for ophaya, ravioli noma pizza. Singasho kagesi ukuthi isinkwa umenzi - Ungumngane kunakho konke kwayo yonke wekhaya. Indlela ukupheka ke kwesokudla inhlama?
inhlama ukubhaka izinkwa ngale ndlela has ezinye izici. Ngokwesibonelo, uma ungayisebenzisi imvubelo elomile fresh ke ugaye kubo futhi uhlanganise e esincane ubisi olufudumele. Ngemva kwemizuzu engu-20 kuphela ungakwazi ukwengeza nabo inqubo. Inhlama in the umenzi isinkwa ravioli noma pizza etholwe kangcono ngokungafani uzilungiselele ngesandla. Inani elikhulu imvubelo noma uketshezi wenze isinkwa okuxekethile. Ngakho-ke, kubalulekile ukuba balandele ncamashi olinganise. Uma inhlama umshini isinkwa ravioli Kwatholakala hhayi esithambile, amanzi kancane ngakho ingezwe.
Lokhu dish isithandwa eziningi, kodwa kunzima ukuthi kokuxova inhlama ukupheka ke! Ngaphezu kwalokho, le nqubo isikhathi ukudliwa. Kulokhu, ukusiza zasendlini. Inhlama in the umenzi isinkwa esizodliwa ravioli okulungiselelwe ngaphandle kwezinkinga, futhi ayidingi isikhathi esiningi. Ukuze ekuwulungiseleleni uzodinga 450 amagremu kafulawa, 210 ml amanzi, isigamu usawoti encane eyodwa amaqanda. Setha insingo yokushefa ngokwenkambiso uhlanganise inhlama umshini isinkwa. Manje, walala endishini zonke izithako. Ukudalulwa okuqhubekayo ohlelweni "amadombolo" bese ulinde inhlama usulungile. Lapha kufanele ucabangele izinto ezimbalwa. Okokuqala, sisebenzisa amanzi kuphela emazingeni okushisa okuvamile. Up alingana, kungenjalo inhlama ngeke ukungaguquguquki ephelele. Uma izinga kuhlangana akuyona wanelisa (like a inhlama), khona-ke ukuqedela ngesandla ke. Ukuze wenze lokhu, thina ukuyikhipha inhlama ne ukwengeza ufulawa mesim ezandleni zakhe. Kodwa ngokuyisisekelo, uma ubuchwepheshe uyalandelwa, umphumela muhle kabi. Ngemva kokuphela nomkhombe inhlama kungenziwa kwesokunxele ngaphakathi umenzi isinkwa akuyona ihora angaphezu kwelilodwa. Uma uke posted, bese ungakhohlwa amboze ucwecwe. Inhlama kuphekwe ravioli ku umenzi isinkwa eye yasinda. Kulokhu, it aba maningi aze ahlanganise gluten, okwenza kube nokunwebeka ngaphezulu. By endleleni, uma kungekho hlelo "amadombolo" (akusiyo on zonke izinhlobo), khona-ke sisebenzisa umsebenzi "test". Kufanele kuqashelwe ukuthi inhlama umshini isinkwa ravioli is wayixova emaminithi la-20. Kulokhu kuyoba okwanele ukulungisa lo ukugxusha ngoba izitsha akhethiwe.
Lokubaluleke kakhulu uyisibonelo umshini isinkwa. Iza phambi lobehlukene, futhi ngenxa yalokho, isitsha nhlobo ezahlukene. Ngakho-ke, kufanele ufunde imiyalelo, zokupheka ekhona kanye namasu ukupheka, okuyinto anamekwe ngamunye zikagesi zasendlini ngokucophelela. Kuye ngobukhulu we isitsha kufanele bakhethwe futhi lemali edingekile of izithako futhi ngezabelo. Kufanele kuqashelwe ukuthi le iresiphi eqondile imodeli yakho kungenziwa kuphela kunqunywa nakho futhi esekelwe idatha ku imiyalelo. Futhi ke kuyomelwe siqu ngendlela yakho ngqo ngawo ungenza inhlama umshini isinkwa. Ungesabi ukuba ulinge, ukubhaka ezihlukahlukene entsha isinkwa. Ungakwazi ukwengeza kunoma yimiphi imikhiqizo esizokwenza kube elimnandi xaxa futhi okumnandi.
Indlebe carp - elula okumnandi
I-pizza inhlama esakhiweni sezinkwa
Ngazi kanjani ukuthi umyeni wami uyakuthanda? izimpawu uqinisekile